Swimwear, Jira reYoga, Zvipfeko zvemukati - Tsime remvura
Nyoro uye yakatambanudzwa katuni pateni vana s ...
Cartoon pateni vana vanoshambira magirazi anonamira ...
New fashoni ruvara musiyano hombe chinzvimbo amai ...
China yekutengeserana nedzimwe nyika yakawedzera mukota yechitatu kusvika pakurekodha kumusoro, zvichiita kuti kuwedzera kwegore-kusvika-zuva kukura mukutengesa kunze kwenyika uye kutengeswa kutendeuka kubva pane zvakaipa kuenda pane zvakanaka, sekureva kwetsika dhata. Musoro wekutungamira kukura kunze kwenyika mumadhora mazwi akasimuka achiwedzera kusvika pa9,9 muzana gore pagore munaGunyana kubva ...
Thailand ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa pasi rose yekudzidzira iyo yoga. Nei Uchifanira Kudzidzira Yoga muThailand Vazhinji vevadzidzi veiyo yoga stellar vanoita kutenderera kwavo kuburikidza neThailand nenzira inoshamisa kazhinji. Varairidzi vepasi rose vakatomboita Thailand musha wavo! Iyi guaran ...
Spain yakadzokorora huwandu hwayo hwekufa kwechirwere checoronavirus nemusi weMuvhuro uye yakakurudzira vachengeti vekunze kuti vadzoke kubva muna Chikunguru sezvo ichirerutsa imwe yekukiya kwakanyanya muEurope, kunyangwe mabhizinesi ekushanya aifungidzira nezve kuponesa mwaka wezhizha. Nyika yechipiri-yakashanyirwa nyika yakavhara d ...
Q1. Ndingaite sei kuti ndiwane muenzaniso wevakomana dhizaini nevasikana Swimsuit yekusimbisa iwo mhando? A: 1. Ndokumbira upe kunyatso kuumbwa, kuvaka, kuwanda, hupamhi zvakare kupedzisa kwejira uye dhizaini zvakare kuyerwa kwehembe kunze kwedu. Zvakare zvishongedzo, Tinogona sekureva kwako ...